China oo ku rakibtay qalabka gantaalaha Koonfurta Badda China ee lagu muransan yahay - Horn Future
China oo ku rakibtay qalabka gantaalaha Koonfurta Badda China ee lagu muransan yahay
Beijing (Reuters) –Wargays taliska shuuciga ah ee China uu maamulo ayaa sheegay in Beijing ay ku rakibtay qalabka gantaalaha Koonfurta Badda China ee lagu muransan yahay si ay uga hortagto 2 markab oo kuwa badda quusa ah oo ay leeyihiin ciidamada Vietnam.
China ayaa sheegay in ciidama dhisida jasiiradaha uu gacanta ku hayo ee kuyaala Koonfurta Badda China ay tahay mid ku kooban waxyaabaha loo baahan yahay ee ah difaaca lagama maarmaanka ah iyo in ay ka sameeyn karaan sida ay rabaan dhulkooda.
Mareykanka ayaa dhaleeceeyey waxa uu ku tilmaamay ciidamaynta China ay ka wada goobeheega badda,waxana uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo xorriyadda socodka iyada oo la sameeynayo kormeer xagga hawada iyo badda ba ah oo joogta ah goobaha u dhow, taas oo ka ka cadhaysiiyay China.
Wargayskan China ayaa ku sheegay in warbixin uu qoray qaybta (WeChat) in nidaamyada gantaalaha la geeyay goobtan ay yihiin nuuca (NORINCO CS / AR -1 55mm) kuwaas oo awood u leh inay helaan, aqoonsadaan iyo in ay weeraan maraakiibta badda quusta ee cadowgu leeyahay ee jasiirada( Fiery Cross Reef ) ee kutaala jasiiradaha( Spratly Islands).
China ayaa waxa uu gacanta ku hayaa jasiiradda (Fiery Cross Reef), laakiin waxa sheeganaya lahaansheheega dalalka Philippines,Vietnam iyo Taiwan.
Warbixinta lagu qoray wargayskan ayaa iyadu aanan sheegin goortii lagu rakibay nidaamkan difaaca ah jasiirasadan, laakiin waxa la yidhi waxay timiday oo ay qayb ka tahay jawaab laga bixiyay bishii May 2014 kadib markii tiro kamid ah Vietnamese ka badda quusa ay ku rakibeen shabakaddaha kalluumaysiga oo aad tiro badan jasiirada( Paracel).
« Marcus Hutchins oo ah wiil British ah oo dunida ka badbaadiyay weerarkii ” madax furasho”	» US lawmaker calls for Trump impeachment